အတွေးအမြင် | Page7| Published | ShweHub brought to you by ShweRoom
By nyomyint 3353 days ago on အတွေးအမြင် from mettalwinpyin.blogspot.sg
ပျော်ရာမှာ မနေရ၊ တော်ရာမှာနေရဟူသော စကားသည် လူသာမန်များ မဆိုထားနှင့် မြတ်ဘုရားရှင် နှင့်သက် ဆိုင်ပါသည်။ ဇာတ်ကြောင်းဤသို့ရှိသည်။
တစ်ခုသော မိုးလရာသီရဲ့ ၀ါဆိုလပြည့်ညချမ်းတစ်ခုမှာ သက္ကတိုင်းအိမ်ရှေ့စံ မင်းသိဒ္ဓတ်သည် အနော်မာကမ်း သို့ လှမ်းထွက်ခဲ့သည်။ အို၊ နာ၊ သေခြင်းကင်းရာကို ရှာချင်လို့၊ တစ်ယောက်တည်း အတွက် မဟုတ်၊ လူသားအာလုံး အတွက်ဖြစ်သည်။
By mohmohkhin 3356 days ago on အတွေးအမြင် from www.99sanay.com
နားဝင်ချိုတဲ့စကားကို လူတိုင်း ကြိုက်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် နားဝင်ချိုအောင် လူတိုင်း မပြောတတ်ကြဘူး။ ကျွန်မဖတ်ဖူးတဲ့ တစ်ခြားလူပြောတဲ့ နားဝင်ချိုစကား တွေကို မျှဝေ လိုက်ပါတယ်။
သမီးနဲ့အတူ အိမ်ဘေးက ကလေးတွေ ခြံထဲမှာ ဆော့ကစားနေကြတယ်။ ကလေးတွေက စိုက်ထားတဲ့ နှင်းဆီပန်းတွေကို ခူးခြွေနေတာကို အိမ်ရှင်ယောက်ျား ကတွေ့တော့ “ဒီမျောက်လောင်းတွေ နှင်းဆီပင်ကို ဖျက်ဆီးနေ ကြတယ်..ငါ သွားဆုံးမလိုက်ဦးမယ်” လို့ ဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောတော့ အိမ်ရှင်မက “ ရှင်အသာနေစမ်းပါ ...ကျွန်မသွားမယ်” ဆိုပြီး ခြံထဲ ဆင်းသွားတယ်။ ကလေးတွေနားရောက်တော့ လေသံနိမ့်ပြီး “သားတို့ သမီးတို့ ဒီနှင်းဆီပင်မှာ အဆူးတွေရှိတယ်.. အခုနားတင်ပဲ အပင်ကို ပိုးသတ်ဆေး ဖြန
By marlarnyein 3356 days ago on အတွေးအမြင် from dhammalatsaung.blogspot.sg
အခွှင့်အရေးနဲ့ အခွှင့်အလမ်းကို ဘယ်လိုယူရမယ်ဆိုတာကိုသိရင်------လူတော်
အဲဒါထက် အဲဒီအခွှင့်အရေးနဲ့ အခွှင့်အလမ်းကို
ဘယ်အချိန်မှာစွန့် လွှတ်ရမယ်လို့ သိရင်တော့ ပိုတော်တဲ့သူပဲပေါ့။
If you know how does you take the chance, you are the wise man.
Than that of it, you are virtuous if you know when you have to give up the chance.
မှတ်သားဖွယ်ရာ ဒဿန စကားများ
Please accept the Truth.
Of course, you will possess only your good will.
လူလိမ္မာ၏မနော ( အထွေထွေမှတ်သားဖွယ်ရာ) ( ၃ )
*~~~ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် အကျိုးရှိသော အချက် ( ၁၂ ) ချက်~~~*
( ၁ ) တောင်းပန်ခြင်း
( ၂ ) မှား၍အသစ်ပြန်လုပ်ရခြင်း
( ၃ ) မှားကြောင်းဝန်ခံခြင်း
( ၄ ) တကိုယ်ကောင်းမကြံခြင်း
( ၅ ) သူငယ်ချင်းထံမှအကြံဥာဏ်တောင်းခြင်း
( ၆ ) တွန့် တိုခြင်းမရှိ ရက်ရောခြင်း
( ၇ ) အခါခါရှုံးသော်လည်းဆက်၍ကြိုးစားခြင်း
( ၈ ) မည်သို့ သောအရာမဆို တွေးတောဆင်ခြင်ပြီးမှလုပ်ခြင်း
( ၉ ) ထောက်ထားစာနာတတ်ခြင်း
( ၁၀ ) အမှားကိုသင်ခန်းစာအဖြစ်ယူတတ်ခြင်း
( ၁၁ ) တပါးသူကိုခွှင့်လွှတ်တတ်ခြင်း
( ၁၂ ) မိမိအပေါ်သို့ကျင့်သင့်ကျထိုက်သောအပြစ်ဒဏ်ကိုခံယူခြင်း။
( လယ်တီပဏ္ဍိတဦးမောင်ကြီး )
လူလိမ္မာ၏မနော ( အထွေထွေမှတ်သားဖွယ်ရာ) ( ၂ )
သင်၏စိတ်ကို မြင့်မြတ်သောအတွေးခေါ်များဖြင့် ပြုစုပျိုးထောင်ပါ ။ ရဲစွမ်းသတ္တိကိုယုံကြည်သူသာလျှင် သူရဲကောင်းဖြစ်နိုင်ပေသည်။
လူလိမ္မာ၏မနော ( အထွေထွေမှတ်သားဖွယ်ရာ) ( ၁ )
ရေတံခွန်နဲ့ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန်သမားဟာ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဖေါက်သွားစမြဲပဲ။
( ရဲထွဋ္ဋ်လှ )
တကယ့်လူဆိုသည်မှာ လူသာမန်တို့ ထက်ထူးကဲသောလူဖြစ်၏။ သို့ ရာတွင် မွေးကတည်းက ထူးကဲသောလူဟူ၍ဘုရားလောင်းမှတပါးမရှိ။ ထိုသာမန်ဘ၀မှ တကယ့်လူဖြစ်စေရန် ဆရာကောင်းလို၏။
( ပီမိုးနင်း )
ဘဝရဲ့  ကစားပွဲများ
By marlarnyein 3364 days ago on အတွေးအမြင် from www.missgreenlady.com
ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ အိမ်မှာ ငြိမ်ငြိမ်မနေရဘဲ ဟိုသွား ဒီသွားနဲ့ ခရီးသွားလာရတဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ ရှုပ်နေတာနဲ့ပဲ စာအသစ် မရေးဖြစ်တာ နည်းနည်း ကြာသွားခဲ့ပါတယ်။ စာအသစ်တွေ အရင်လို မရေးနိုင်ခင်မှာ သွားရင်း လာရင်း ကားပေါ်မှာ၊ ခရီးမှာ မထင်မှတ်ပဲ Angry Birds ဆိုတဲ့ ဂိမ်းကို ကျွန်မ ကစားမိခဲ့စဉ်က ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ တွေးမိတဲ့ အတွေးအမြင်တွေ အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ ကျွန်မဟာ ဂိမ်းတွေ ဘာတွေကို ဆော့လေ့ ဆော့ထ ရှိတဲ့သူ တစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်များတာရယ်၊ ရှားရှားပါးပါး ရတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အချိန်၊ စာရေး စာဖတ်လုပ်ချိန်တွေထဲကနေ ဖဲ့ပြီး မပေးချင်တာရယ်၊ အစလုပ်ပြီး မကစားချင်တာရယ် စတ
By suwatisoe 3365 days ago on အတွေးအမြင် from yawainwe.com
မြတ်စွာဘုရား လက်ထက်တော်က ဒန္တိကာဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးလေး တစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒန္တိကာ အရွယ်ရောက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ အနာထပိဏ် သူဌေးကြီးရဲ့ ဇေတဝန်ကျောင်း ရေစက်ချ အလှုပွဲကြီးနဲ့ ကြုံလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီကျောင်း ရေစက်ချပွဲကြီး ကိုကြည့်ပြီး သာသနာ့ဘောင်ကို ဝင်ချင်တဲ့ စိတ်စဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချက်ချင်း မဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဖြစ်ပြီးတဲ့ အကုသိုလ်ကို ဘယ်လိုပယ်မလဲ?
ဖြစ်ပြီးတဲ့ အကုသိုလ်ကို ဘယ်လိုပယ်မလဲ…? မေးခွန်းရဲ့ သဘောလေးကို ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားအောင် ကြားဖူးတဲ့ သမ္မပ္ပဓာန် လေးပါးဘက်က လှည့်ပြောရအောင်ပါ။
မြတ်စွာဘုရား လက်ထက်တော်က ပသေနဒီကောသလ မင်းကြီးဟာ ဆန်တစ်စိတ် (လေးပြည်) ချက်ထမင်းကို ကုန်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဟင်းကိုလည်း ဆန်တစ်စိတ်ချက်နဲ့ ညီမျှအောင် စီစဉ်ပေးရ ပါတယ်တဲ့။ တစ်နေ့မှာတော့ ထမင်းစားပြီးပြီးချင်း မြတ်စွာဘုရား ဆီထွက်ခဲ့ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရား ဆီရောက် တော့ဦးချပြီး ထိုင်နေ လိုက်ပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ထမင်းဆိပ်တက်ပြီး အိပ်ငိုက် နေပါတော့တယ် ဒီတော့ မြတ်စွာဘုရားက “မင်းကြီး.... ထမင်းစားပြီး အပန်းလေးမဖြေခဲ့ ဘူးလား”လို့ မေးတော် မူပါတယ်။ ပသေနဒီ ကောသလ မင်းကြီးကလည်း “မှန်ပါဘုရား အပန်းမဖြေခဲ့ ပါဘူးဘုရား၊ တပည့်တော်မှာ ထမင်းစားပြီးတိုင်း ဒီလိုဒုက္ခ ကြုံရပါတယ် ဘုရား”လို့ ပြန်ေ
မြတ်စွာဘုရား လက်ထက်တော်က မထင်ရှားတဲ့ ရဟန်းငယ်လေး တစ်ပါး ရှိပါတယ်။ အညတရ ရဟန်းလေးလို့ပဲ ဆိုပါတော၊့ အဲဒီအညတရ ရဟန်းလေးဟာ ဖြစ်ပျက် ကမ္မဋ္ဌာန်း ကို ကြိုးစား အားထုတ်နေပါတယ်။ တရားအားထုတ် နေတုန်းမှာပဲ နားကိုက် ဝေဒနာ ဖြစ်လာ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရားအားထုတ်လို့ မရတော့ပါဘူး။